यमनी शान्ति प्रक्रियामा सङ्कट, साउदी सम्झौताको सीमा पनि घर्कियो - नेपालबहस
| १८:४१:२५ मा प्रकाशित
२३ मंसिर एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त यमन सरकार र दक्षिणमा सक्रिय पृथकतावादीहरूबीच सत्ताको बाँडफाँट गर्ने सम्झौता गर्न विफल भएका छन् । यमनमा जारी वर्षौंदेखिको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने एउटा प्रयासमा यसलाई अशुभ सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।
“युद्धको भूमरीमा गृहयुद्ध”लाई अन्त्य गर्न साउदी अरेबियाको पहलमा दक्षिणी सङ्क्रमणकालीन परिषद् ‘एसटीसी’ सँग शक्ति बाँडफाँट गर्ने सम्झौता भएको थियो जसअन्तर्गत दुवै पक्ष नयाँ सरकारमा सहभागी हुनेछन् र राजधानी एडेनमा फर्कनेछन् ।
“रियाद सम्झौताको समयरेखा वास्तवमै महत्वाकाङ्क्षी थियो । समयसीमा घर्किनु कुनै आश्चर्यलाग्दो कुरा होइन,” यमन विज्ञ एवं अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो एलिजाबेथ केन्डालले एएफपीलाई बताए ।
“सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो : के प्रतिबद्धताहरूमा मात्र ढिलाइ भइरहेको छ, वा ती अन्ततः प्राप्त गर्न असम्भव थिए ?” दुवै पक्षको भनाइमा दुवै पक्ष रियाद सम्झौतामा प्रतिबद्ध रहेका छन् तर तोकिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन हुन नसकेकामा उनीहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
एसटीसीका प्रवक्ता निजार हैथामले बिहीबार यमन सरकार “यो सम्झौताबाट विचलित भइरहेको र दक्षिणमा आफ्नो सेना परिचालन गरिरहेको” बताए । तर हालैमात्र एसटीसीका एक अधिकारीले एएफपीलाई रियाद सम्झौताको कार्यान्वयनको काम चलिरहेको र सैन्य तथा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा “महत्वपूर्ण प्रगति” भएको बताएका थिए ।
“अर्को हप्तादेखि नै, हामी सहमति भएका बुँदाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नेछौँ,” उक्त स्रोतले बतायो । सरकारका प्रवक्ता राजीह बाडीले पृथकतावादीहरू नै रियाद सम्झौताको पालना गर्न असफल भइरहेको आरोप लगाए ।
उनले दक्षिणमा सरकारी सैन्यहरू रियाद सम्झौता र साउदी गठबन्धनको समन्वयमा कारबाहीमा खटिएको बताए । दुबै पक्ष हुथीविरुद्धको कारबाहीमा अझ सक्रिय हुन लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यद्यपि दक्षिणी क्षेत्रमा सशस्त्र सङ्घर्षमा धेरै हदसम्म कमी आएको भए पनि परिस्थिति अझै पनि निकै नाजुक छ, केन्डालले भने । उनले भने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र कार्यान्वयनमा लैजानुमा निकै अन्तर छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम दुबै पक्षका सुरक्षा फौजलाई रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रारम्भिक कार्यसमेत यस बीचमा हुन सकेको छैन । दक्षिणमा फैलिएको अशान्तिले साउदी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धनलाई हुथी विद्रोहीविरुद्धको लडाईंमा अलमल्याएको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेको अन्तरिम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै ठोस प्रगतिको अभाव झेल्दै आएको छ । एडेन निवासी मोहम्मद बजिरले शहरमा निराशा मात्र बढेको एएफपीसँग गुनासो गरे ।
“पटक पटकका यस्ता समयसीमा कैयौँ घर्किसके, यहाँ कुनै परिवर्तन देख्न पाइएन,” उनले भने, “हामी केवल परिस्थितिहरू अझ खराब हुँदै गइरहेको मात्र देख्न सक्छौँ ।”
प्रहरीको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गरी वितरण ५३ मिनेट पहिले
द्रुतमार्गको दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माण सम्झौता ५५ मिनेट पहिले
कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को अवस्थाबारे कार्यक्रम गर्दै ५९ मिनेट पहिले
ओली नेपाललाई कार्यदल बनाउने जिम्मा २४ घण्टा पहिले
डोटीमा निषेधाज्ञा आगामी जेठ १५ गतेसम्म थप २ दिन पहिले
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कोरोनामुक्त, पूर्वरानीको स्वास्थ्यमा लगातार सुधार ४ दिन पहिले
ऋणपत्र के हो ? ऋणपत्रमा लगानी गर्दा के के फाइदा हुन्छ ? २ दिन पहिले
समस्या परे जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न कामपाको आग्रह २ हप्ता पहिले
ठाकुर र महतो निकट सांसद भक्तपुरको एक रिसोर्टमा भेला २ दिन पहिले
पत्रकार पौडेलको ‘स्मृतिका तरङ्ग’ कृति बजारमा २ हप्ता पहिले
पर्साका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत सात संक्रमितको मृत्यु ५ दिन पहिले
कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि गाउँपालिका बन्द २ हप्ता पहिले
कलेनाका बालबालिकालाई स्टेसनरीका सामग्री वितरण ३ हप्ता पहिले
राजीनामा दिएर पोखरेलले पुन: मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सुरक्षित राखे ! २ हप्ता पहिले
एनआईसी एशिया बैंकबाट निःशुल्क आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन सकिने १ वर्ष पहिले
पहिरो पीडितलाई एन्फाको सहयोग ८ महिना पहिले
ओलीको हार सुरु: प्रचण्ड ४ हप्ता पहिले